बडा-दशैंको शुभकामना !!!
बर्षमा एक चोटि आउने यो महान चाड बिजया दशमीको सुखद उपलक्ष्यमा यस ब्लग छिर्नुहुने महानुभावहरु लगायत संसारको कुनै पनि ठाउँमा रहनुभएका नेपालीजनमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना !
तराई, मुस्ताङ र छत्रे टोपी :
हिमालको चिसो पानीको बहावले पहाडको मल बगाउंदैं सिंचित हुने समथर भु-भाग, तराई । बाहुन, क्षेत्री, नेवार र जराइ लगायत सबैको बसोबासको सुन्दर सपना, तराई । राणा खान्दानलाई थोत्रो भोटो दिने कृष्णप्रसाद देखि जननिर्बाचित प्रधानमन्त्रीहरु मातृका र महामानब बी पी जन्माउने अनि बिराटनगर जुट मिलको आन्दोलनले गिरिजाप्रसाद र मनमोहनहरु जन्माउने, तराई । दाईजो कम ल्याएको झोंकमा छोरी-बुहारीको लाश अन्माउने, तराई । एउटा नेपालीलाई हिमालदेखी पहाड हुंदैं संगम हुन मन लाग्ने जग्गा, तराई । कृष्णप्रसाद र उनका तीन भाइ प्रधानमन्त्री छोराहरु मात्रै होईन, प्रथम कम्युनिस्ट प्रधान्मन्त्री मनमोहन अधिकारी, नेपाली कांग्रेसका नेता महेन्द्रनरायण निधी र मधेशका धरोहर गजेन्द्रनारायण सिंह जन्माउने गर्भ, तराई । तर आज तराई, तराई नभएर भारतको खिंचडि पाक्ने कराइ भएको छ । आफ्नै दाजुभाईलाई शत्रु देख्ने पराई भएको छ । एउटा गजेन्द्रनरायण देखि फुटेर दुगड हुदैं हराइरहेको छ । एन जी ओ को नाममा खुलेको जयप्रकाशको गुप्त योजना भ्रस्टाचारको खोल ओड्दै फोरम पार्टी बाट मन्त्रीको हलो अड्कदा आज हामीलाई 'सेन्सर्' लगाउन सक्ने पावरको संचारमन्त्री हुँदै जोतिन थालेको छ । टुक्रा-टुक्रामा बिभक्त मधेश र तराइका पार्टीहरुमाझ इमान्दार महन्थ ठाकुरको 'इमेज' हराइसकेको छ । महापन्च देखि महाकांग्रेसी भएका गणेश लामाका सिर्जक गच्छेदारको हातमा गृह मन्त्रालय छ । नेपाल सरकारको तथ्यांकमा सबैभन्दा 'धनि, खतरनाक र महाडन' रक्तचन्दन कम्पनीका मालिक लामाका आंखाले अब एउटा मात्रै आंखा देख्ने गृह मन्त्रीज्युको नजरले 'स्वच्छ प्रशाशन' मा के के देख्ने हो, हेर्न बाँकी छ । श्रीमती र आफन्त बरु नहोस्, सरकारैपिच्छे मन्त्री नभै नहुने, नत्र दोस्रो आंखा पनि नदेख्ने बिजय प्रब्रितीले गांजेको तराईबाट अब कति गांजाका बोराहरु बिदेशिने हुन्, त्यो त कि गांजा तान्ने निर्जिब पशुपतीनाथलाई थाहा होला, कि त गणेश लामा भगवानलाई । यी यस्ता भ्रस्टाचारीहरुलाई जन्माउने, हुर्काउने अनि आंखै फुटेपनि निर्बाचित गराउने जन्मभुमि, हाम्रो तराई । चिरन्जिवी वाग्लेसंगै जांड तानेका जयप्रकाश गुप्तालाई चोखो देख्ने आंखा नभा'को तराई । गोली र बन्दुकको भरमा राजनीति गर्ने 'सर्प कांचुले' गच्चदारलाई दुइ-दुइ क्षेत्रबाट निर्बाचित गराउने, बिशुद्ध भुभाग, तराई । गजेन्द्रनारायणको लाशमा कात्रो ओढाउन नपाउंदै आनन्ददेबीलाई थर्काएर 'मधेश एकता'मा २४ टुक्रा हुने पार्टीको कर्मभुमि, तराई । गद्दाफीले तेलको फुर्तीमा शाशन गरे जसरी धोती र कुर्ता लगाएर मन्त्रालयबाट भारतलाई तेल बेच्ने कागजमा रबर स्टाम्प लगाउने राजेन्द्र महतो जन्माउने, तराई । अबसरका लागि आफन्तको घांटी निमोठ्न पछि नपर्ने, रास्ट्रबादको नाममा 'पैसावाल' मन्त्रालयमा रजाइं गर्न पल्केका नव-भ्रस्टाचारी उत्पादन गर्ने थलो, तराई । सिमापारीको देश, मुस्ताङ । केन्द्रमा राजा हराएपनि मुस्ताङे राजाको अगाडि प्रचन्ड र बाबुराम त के गांजा उपहार लिएर गच्छेदार गए पनि गल्छन रे । स-शस्त्र युद्ध ताका माओवादीले 'जनसरकार' चलाए जस्तो । उनको आफ्नै खटन-पटन छ रे । मैले त देखेको छैन् त्यो देश । केही हप्ता भयो बरु, 'मुस्ताङ गाडी' देखेको । तर हामीलाई थाहा छ, मुस्ताङको स्याउले बजार पाएको छैन । दन्तलहरे तरिकाले फलेका ती सुन्दर स्याउका दाना उचित बजारमा पुर्याउन हुन त कसलाई पो फुर्शद छ र ? भारत र चाइनामै मात्र त्यो फलेको भए, प्रहरी र सेनाले बजार पुर्याउंथे । जनताको घरमा पुग्थ्यो । हामीकहां त्यस्तो भैदिएको भए, दिनभरी खेतमा काम गरेर फर्कदा बजारमा किन्न पाइन्थ्यो होला । कुटु-कुटु चपाउंदै लुदी खोला तरेर मास्केछापको उकालो चढ्न पाउंथे होलान्, किसानहरु । बस लागेर झ्यालबाट छाद्दै आउंदा मुग्लिनमा आफ्नै देशको मुस्ताङे स्याउ टोक्न पाइन्थ्यो होला । दिनभरी ज्यालामा काम गर्ने भरिया दाईहरुले काउली किन्न नसकेपनि बाल-बच्चालाई एक दानो स्याउ लिएर बासस्थानतिर बाटो तताउंथे होलान् । अरु केही नभए आन्दोलन र चक्काजामको बखत वाइ सी एल, यू फो र त द ले ढुङाको सट्टा स्याउले सरकारी गाडीको सिसामा बजार्न पाउंथे होला । तर यहाँ प्रहरीलाई डनहरुसंग हातेमालो गर्दैमा फुर्सद छैन । सेनालाई नागर्जुनहरुमा गरेका बलत्कारका घटनाहरुको फाइल मिलाउंदै फुर्सद छैन । सशस्त्रलाई बर्दीको लागि चाकरी गर्दैमा फुर्सद छैन । तीन लाख सेना र प्रहरीको संख्याबाट बीस हजार बललाई मात्र मुस्ताङको स्याउ ओसार्न लगाए हुदैंन ? तिघ्रा पिटेर भात बजाउनु भन्दा बढ्ता के काम छ तीनको ? सुडान घोटला खान सक्ने, एतिहासिक हतियार बिदेश पैठारी गर्न सक्ने, सर्ब-साधारण जनताको टाउकोमा कटबांसको लठ्ठी बजार्न सक्ने भूस्-तिघ्रेहरु के का लागि पाल्नु पर्‍यो त ? राजनैतिक पहुंचको भरमा तराई देखि पहाडका टाकुराबाट 'राजनैतिक चाकरीको बिरामी' बोक्न सक्ने हेलोकोप्टरले मुस्ताङको स्याउ बोक्न सक्दैन ? सबैभन्दा अग्लो स्थानमा मन्त्रीपरिशदको बैठक गरि आफन्त बोकेर सोल्टी होटेलको भात 'लन्च' गराउने खर्चले मुस्ताङ्बात स्याउ आउंदैन ? सपरिवार बिदेश भ्रमण गराउने र गोदावरिमा रक्सीले छोरा टिल्ल परि सोफामा लडेको ट्वाल्ल हेर्न सक्ने जनवादी नेताले वाइ सी एल लगाउन सक्दैन, मुस्ताङको स्याउ टिप्न ? महाराजाहरुको शालिक र दुर संचारको टावर हल्लाउन सक्नेहरुले जाबो हिउंमा फलेको स्याउको बुटा हल्लाउन सक्दैनन ? चार करोड खर्च गरेर राजधानीबाट गुन्डा ओसारेर बिराटनगरमा 'परशुराम बचाउ आम्-सभा' गर्न सक्ने यु फो ले मुस्ताङको स्याउ ल्याउन सक्दैन ? नारायण वाग्लेलाइ थर्काउनेले तनहुंको खैरेनी चोकमा स्याउ बांड्ने हिम्मत गरोस न ! कहिले खुम बहादुर त कहिले गोबिन्दराजको हत्केलामा नाच्ने तरुण दलले लछारेर ल्याओस न, मुस्ताङे स्याउको हांगा बाट, सुन्दर दाना । यहाँ तपाइ हामीले घोक्रो सुकाएर केही हुने वाला छैन । बिचरा प्रधानमन्त्री डा. सा'बको 'मुस्ताङ गाडी' त्यहां पुगेर फर्कदा बाटोमा मोहन बैदयका झांक्रीहरुको मशाल जुलुशले स्याउ बाटोमै कुहिने खतरा । जना सेनाका ब्यारेकमा पुर्याउदिउं, कुन पक्षलाई भाग लगाउने ? यसरी अलपत्र पारेको बेला हाम्रो साहारा को ? नेपाली जनताको संबिधानको लेखक को ? लाग्छ, मुस्ताङ गाडिमा चढाएर डा. सा'बले यी ६०१ लाई त्यहांका झाक्री लगाइ फुकाउनुको बिकल्प छैन । नाङ्गै राखेर त्यो चिसोमा, जब झांक्रीले प्रत्येक सभासदलाई पालैपालो अश्ठोत्तर सय (१०८) चोटि स्याउका गेडाले टाउकोमा हान्छन । अनि त्यो ठन्डिमा यिनका दिमागमा चिसो पस्ला । एस एल सी पास पनि नगरेका बायू सेवा निगमका जी एम साहेबलाई एउटा "मुस्ताङे हाजात" किन्न लगाएर हिमालपारीको त्यो देशमा झारफूक गर्न लागे कसो होला ? नत्र दुई चिराको नासपाती कांग्रेस, तीन चिराको बेलाउंती माओबादी, चार चिराको फर्सी एमाले र पांच चिराको कुभिण्डो मधेशीहरुबाट केही हुने वाला छैन । यो गर्मी र बर्शादले झाडा-पखाला लागेका पहाडेहरुलाई जीबन-जल दिलाउने, आगलागी र सर्पको टोकाइले ग्रसित तराइयाहरुलाई मल्हम दिलाउने र चिसोले कठाङ्रिएर चाउरिएका हिमालेहरुलाई कम्बल दिलाउने 'बहादुर' कुन आउंला, यो देशमा ? दश बर्शे आन्दोलनताका बाबुरामको अनुहार हेर्न सबै आतुर हुन्थे । रबिन्द्र मिश्रसंगको उनको 'लेखकीय जुहारी', शाही शाशन बारेको लेख र पार्टीको कारबाहीको स्पष्टिकरण । उनले लेखेका सम्पुर्ण लेखहरु 'हट केक' हुन्थे । बेला बेलामा सार्वजनिक हुने उनको शिरको 'छत्रे टोपी'मा सजिएको उनको अनुहार निकै प्रख्यात थियो । सबै बादीहरुका पत्रिकाहरुले बडा मजाले छाप्थे, उनको अनुहार । कुनै जमानामा टाउकोको मुल्य तोक्दा लाग्थ्यो, उनको टोपीको नै १६ लाख पर्दथ्यो । तर आज १६ लाख पर्ने टोपी बराबरको गाडी चद्छन्, प्रधानमन्त्री । नेपाली इतिहासको अलौकिक उदाहरण । डेढ लाखको पलङ्ग र लाखौंको उपहारे 'राडो' घडीलाई चुनौती । चमेलिया र मध्य मर्स्याङ्दीका करोडौं रुपैंयाका गाडीहरुको बे-वास्ता । 'छत्रे टोपी'ले त्यहि साधारणता देखाउंछ । कसैको बयान गाए जस्तो हुन्छ, भ्रम नपरोस्, नेपालीहरुका आशाका केन्द्र डा. सा'बको शेखी नझरोस । क्रान्तिकारिताको रेखी नमेटियोस । गाउंले हुनुको बिगतको 'देखि' नछुटोस । हिजोका दिनमा हिसिला यमिले नेपाल सरकारका भ्याएसम्मका संस्थानमा सासु, दिदि, बहिनि, नन्द, फूपु र भाउजुहरु भर्ती गरेको घटना नघटोस । नेपालका प्रत्यक भाग र प्रत्यक मौसममा ओडिने नेपालमा बनेको ? 'मुस्ताङे गाडी' जस्तै नेपाली हातले बनेको नेपाली छाता 'छत्री' को प्रतिक 'छत्रे टोपि'ले त्यहि नमुना जनाउंछ, जुन छत्रीले प्रत्यक गरीब नेपालीको घनघोर बर्षा र टन्टलापुर घामलाई सजिलै छेक्दछ । डा. सा'बको टोपिमा अल्झाउने डोरी थिएन होला, सायद् । त्यसैले उहाँको पार्टी टाइ र सुट लगाउंछ । उहांका पार्टिका प्रत्यक एरिया इन्चार्जहरुसंग मध्य-मर्स्याङ्दीका महंगा गाडीहरु छन् । तर प्रत्यक छत्रीमा घांटीमा अल्झाउने डोरी राखिएको हुन्छ । जत्रै ठुला बतासले पनि त्यसलाई उडाउंन सक्दैन, बरु हावाले किसानको घांटी नै किन नछिनालोस । अब डा. सा'बको छत्रे टोपीमा गणेश लामाले रक्तचन्दनको बोरा बांध्ने डोरी अल्झियो भने, गच्छेदारले लगाउने चश्माको तुनो अल्झियो भने, महतोले लगाउने सुरुवालको इंजार अल्झियो भने, यादबले लगाउने भारतीय कमिजको धागो अल्झियो भने, गुप्ताको टेलिफोनको तार अल्झियो भने, बैध्यको मशालको रांकोको झिल्का अल्झियो भने र टोपीमा दाहालको "राडो" घडीको पिन अल्झियो भने हिजोका कोइराला, देउबा, नेपाल र खनाल भन्दा भट्भटिन भट्टराइको पनि बेर लाग्दैन । एउटा "मुस्ताङे गाडी'मा आखिर के नै पो अट्न सक्छ र ?
आंखाभरी आंशु हुंदा .....
अनायाशै रुवाउने विश्वाशको घात थियो,
आंखाभरी आंशु हुंदा त्यो औंशीको रात थियो ।
सोचे मात्रै पुग्छ भन्थे मायामा, पुगेन खै त,
सांचो बाटोमा छार हाल्ने रोगको खात थियो ।
झाडिको फूल टिप्न चढ्नु पर्ने उकालिमा
पक्षघातले ग्रसित असमर्थ हात थियो ।
चौतारीको शान्त पत्केराहरु भएन माया,
सायद् पतेरा लागेका सिमलको पात थियो ।
भएन साथ कहिल्यै हमेशा गुज्रिने जिबनमा
कसम नखाएको अपुरो बाचाको बात थियो ।
सुकोमल हातहरुले सुम्सुम्याउने बेलामा,
कैदमा बज्रिने कठोर खालको लात थियो ।
लैला मजनुको कथाले थाकेको सत्यतामा
असफल प्रेमी हुनु नै कसैको जात थियो ।
भ्रष्टाचारीहरुको 'लाश' बनेर आओस्, नयाँ बर्ष
संबिधान नलेख्नेहरुको 'उठिबाश' बनेर आओस, नयाँ बर्ष,
निमुखाहरुको 'उल्लास ' बनेर आओस, नयाँ बर्ष
नेपाल आमाको मुहार 'झकांस' बनेर आओस, नयाँ बर्ष ।
नयाँ आशा र प्रगती बोकेर आउने नयाँ बर्ष २०६८ सालको मंगलमय शुभकामना !!!
सुन्दर सपनाहरु बोकेर बिदेशिनु सोचेजस्तो कहाँ सबल हुन्छ र ? धन कमाउंला, जस्ताको छानो छाउंला, साहुहरुको ॠण तिरौंला, केही बचेका सुकीहरु लागेर परिवार संगै बाँकी जिन्दगी मानो पाथिमा बिताउंला भन्ने सपना पनि सबैका कहाँ सफल हुंदा रहेछन् र ? सबल सपना सफल हुनु सजिलो रहेनछ । दशैंमा टीका लगाउन तयार निधार ॠणको पोको बोकेर धनको धोकोमा हिड्नु शायदै सहज होला । हाम्रा पसिना चुसेर पनि नपुगेर राश्ट्रको ढुकुटी लुट्ने भ्रश्टाचारीहरु, दिनभरी भारी बोकेर खाने कांधमा गोली ठोक्ने लठैतहरु, संबिधान बनाउने नाममा घरको छाक बचाएर संसद भवनमा लन्च र डिनर खान पल्केका बकम्फुसेहरुको जगजगीले अबसर गुमेपछी परदेश भासिएका लाखौं नेपाली युबक र चेलिहरुका सपना कहाँ साकार भएका छन र ? उपायनास्ती जिन्दगीलाई दुई पैसा कमाउने प्रलोभनले जब अरबको मरुभुमी पुर्याउंछ, ती नेपालाई चेली त्यहि बलात्क्रीत र हत्या भएका कयौं घटनाहरु ताजै छन्, हाम्रा सामु । धेरै कमाउने अशामा जायज्याथा बेचेर किनिएको हवाइ टिकेटको म्याद नसकिदैं कामको सट्टा जेलमा चिसिनुपर्ने बाध्यताहरु पनि हाम्रै दाजुभाईहरुले भोगेकै कुरा हो ।
गत बर्ष अमेरिकाको बोस्टनमा एउटा सन्कीले वहियातमा हाम्रा दाजुको हत्या गर्‍यो । अमेरिकाको टेक्सास पनि यस्ता हत्या बढी नै हुने स्थानमा गनिन्छ । बाल्टिमोरमा कन्चटमा पेस्तोल नतेर्स्याइएका कमै नेपाली होलान् । अबसरको खोजिमा यसरी परदेशिंदा आफ्नो कर्तब्य निर्बाहको क्रममा सित्तैमा यहाँका 'साला' अपराधीहरुको गोलिमा जिन्दगी जाने डराइमर्दो अवस्था छ । र हिजो, झापाका हाम्रा भाई रोशन भण्डारीको हत्या भएको छ । दर्दनाक यस्ता घटनाका पछाडि धेरै खेलहरु छन्, त्यो भन्दा बढी संसारमा आफूलाई सर्बेसर्बा ठान्ने कथित अमेरिकी कानुनको । आफूले काम गर्ने ठाउंमा कसैले डकैत (Robbery) गर्‍यो । आफ्नै आंखा अगाडि घटेका घटनाको बेलिबिस्तार स्थानिय प्रशाशनलाई जानकारी गराउनै पर्ने । प्रशाशनले चोर् देखेको थीइस् भन्छ, सांचो बोलुं - चोरको अगाडि अदालतमा साक्षी बस्न जानु पर्ने । नभनुं, साहुले चोरीले आफूलाई घाटा लागेको बहानामा जागिरबाट लात मारिदिने । जाबो सात डलरको लोभमा काम गर्नुपर्ने हाम्रो मजदुरी जिन्दगी, त्यो पनि सालाहरुको पेस्तोलको गोलीको डरमा । कर्तब्यवान रोशनले चोरको अगाडि प्रस्तुत हुन अदालत जानुपर्ने भो । साला अपराधीहरुले उनलाई अदालत जना लगेकै बखत रोशनले काम गर्ने स्टोरकै अगाडि उनकै कारभित्र गोली ठोके, उनी त्यहिं मरे । कानुनी राजको बखान गरि नथाक्ने अमेरिकी आडम्बरी नियम्, चोरको अगाडि 'हो, त्यहि हो अपराधि' भन्न जानु पर्ने । साहु हामीले जाबो पानी मिसाएको कोक पियौं कि भनेर घरमा बसेर भिडियो हेर्छ, हामी भने साहुको दोकानमा पानी मिसाएको कोक पनि खेर नजाओस भनेर ट्र्यासमा फ्यांकिएका कपहरु पनि धोइ पखाली राखिदिन्छौं । कसैले मात्रा भन्दा बढी पिएमा 'रिफिल चार्ज' भन्दै ९९ सेन्टस चार्ज लगाउछौं, झगडा गर्छौं, बिएर चोरेर भाग्न लागे भने आफ्नो अगाडि भएको स्टापलरले चोरको टाउकोमा हान्छौं । इमन्दारिताको त्यो प्रयास कहाँ लागु हुन्छ र ? कहाँ अमेरिकी जिससले देख्छन र ? बदालामा साला अपराधीहरुको गोली हामि नै खान्छौं । लस एन्जलसमा हिजो अपराधीहरुले 'साक्षि' बिचरा भाइ रोशनको जिन्दगी नै उडाइदिए, २ घन्टा पछि पुलिस आयो रे, अपराधी भग्यो । साहुले के गुमायो त ? मुला सात डलरे हाम्रो जिन्दगी त्यसै जान्छ । बेरोजगारीले डकैती बढेको छा अमेरिकाको कुनै पनि कुनामा । फेरि जहाँ कुनो, त्यहि ७-११ भने स्टोर । डकैतहरु त लुट्न कुनो खोइज्दै न आंउछन्, त्यहि कुनामा हामीहरु काम गरिराखेका हुन्छम्, अनाहकमा आफ्नै दुनो मासिरहेका हुन्छौं, त्यहां सिंगो अमेरिका हुन्छ, जहां अपराधीहरु धेरै हुन्छन् ।
त्यो सुन्दर जन्मभुमिमा बत्ति बल्दैन । यहाँ बत्ति बलिराखेकै बेलामा हामीलाई गोली ठोक्छन । चोर नेताहरुका सन्तान पजेरोमा सवार हुदैं भारतिय बोर्डिङ पढ्छन्, यहाँ हामि घन्टाको सात डलरमा काम गरेर, कलेजको शुल्क तिरेर बचेँको पैसाले एउटा खटारो किन्छम । रास्ट्रको ढुकुती डकैत गर्नेका सन्तानहरु सुरा र सुन्दरीको साथमा तिनका बाउका शेयर भएको क्यासिनोमा च्याखे थाप्छन्, यहाँ हामी थोत्रो फ्रिजरमा राखेको बासी पिज्जा टोक्दै साहुलाई अझै साहु बनाउन छातीमा गोली थाप्छम । जांदले लठ्ठ भ्रश्टाचारिका सन्तान लिन क्यासिनो र नाङ्गा बारमा गार्ड सहित पजेराहरु पुग्छन्, ती अर्धम्रित जाडका पोकाहरु उठाउन । यहाँ हाम्रो लाश उठाउने कोहि हुदैन । बियोग र बेदनामा बित्दो रहेछ, परदेशको जिन्दगी । कसलाई भनेर के नै पो मिल्दो रहेछ र ?
रामेश्वर खनाल जस्ता कर्मठ कर्मचारी अट्दैनन्, देशको काममा । कुलेखानी सुक्यो, मर्श्याङ्दी बग्दैन । कालिगन्डकी कहीले बनेर देश्ले बिजुली पाउने ? भारतबाट 'दो रुपये' लिएर नेपाल छिरेका धोतीहरुको भलाइका लागि झलनाथ खनाल र भरतमोहनहरुको लालमोहर लाग्छ । १० औं खर्ब रुपैया कर छल्ने चौधरी र गोल्छहरुको पन्जामा अडेको छ, मुलुक । रास्ट्र बनाउन खलाती खियाउने गोल्छेहरुको आरान बन्द, आवाज बन्द र आवास बन्द । ससुरालीको आडमा अबैध धन्दा गर्ने रुबेल चौधरीहरुको पेवा रहेछ, नेपाल । मामाघरमा मजाले फलेको मेवा रहेछ, नेपाल बिनोद चौधरीहरुको । यी देश् लुटुवाहरुलाई दिने पैसा नेपाल आमाले अरबको खाडिमा पसिना चुहाउने ज्यानहरुलाई दिएको भए, कति कुखुराहरु पालिन्थे होला ? काउली कति फल्दाहुन्, खोरियाहरुमा ? कोरियाहरुमा सपना सजाउन पासपोर्ट लिना पररास्ट्र मन्त्रालयमा तीन दिनदेखी लाइन लागेका 'शक्ति'लाई सक्छन भने झलनाथले लाइनमै कम्तिमा १० हजार रुपैया ॠण हातमा राखिदिने शाहस गरुन् । अनी हेरौं, कहाँ के फल्दोरहेछ ? त्यसो त, हाम्रो त न पेवा न मेवा ! आमाले पेवामा पाल्नुभाको रतौली बाख्रा र मामघरका हजुरबुवाले दिनुभाको खोरिया बेचेर परदेश आइयो । काम नगरौ, के खाने ? ॠणको त कुरै छाडौं, गरौं, सालाहरुको पेस्तोलको डराइमर्दो जिन्दगी ।
रोशन भण्डारीको आत्माले शान्ति पाओस् । हार्दिक श्रद्धान्जली तिमीलाई !!!